के बेलायतमा नर्सले वर्षको ७५ लाख रुपियाँ कमाउँछन् ? | We Nepali
नेपाली नर्सले बेलायत आउन एक पैसा तिर्न पर्दैन
२०७८ पुष ३० गते १०:२६
लण्डन । नेपालको लोकप्रिय अनलाइनखबर डटकमले विहीबार एउटा समाचार प्रकाशन गर्यो –नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीबारे भोलिदेखि औपचारिक वार्ता शीर्षकमा । हुनत बेलायतमा नेपालबाट नर्स ल्याउने भन्ने समाचार यसअघि पनि नेपाली मिडियामा नआएका होइनन् तर यस समाचारमा पटकपटक दोहोरिएको एउटा वाक्य छ ‘बेलायतमा नर्सहरुले मासिक चार हजार पाउण्डसम्म तलब पाउँछन् (वार्षिक ७५ लाखसम्म तलब पाउन सक्छन् ।)’
प्रस्तुत समाचार बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ले नेपालबाट बेलायत ल्याउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको नर्सको बारेमा थियो । वीनेपालीले बेलायतमा एनएचएसमा कार्यरत नेपाली नर्सहरुलाई यही प्रश्न गरेको थियो – के नेपालबाट बेलायत आउने नर्सले वर्षको ७५ लाख कमाउन सक्छन् त ?
नेपलिज नर्सिङ एसोसिएन युकेकी अध्यक्ष तथा बेलायतको एक अस्पतालमा स्पेशलिष्ट नर्सका रुपमा कार्यरत सुनिता गौतम भन्छिन्, “त्यति तलब पाउने नर्सहरु पनि हुनुहुन्छ तर त्यो तहमा पुग्नलाई समय लाग्छ । एनएचएसमा काम शुरु गर्नासाथ पाउने तलब वार्षिक करिब २५ हजार पाउण्ड हो ।”
नेपाली मिडियाले उल्लेख नगरेको अर्को पाटो हो नर्सहरुले तिर्नुपर्ने कर । एसोसिएनकी अध्यक्ष सुनिता गौतम भन्छिन्, “नेपालका मिडियाले बेलायतमा नर्सले पाउन सक्ने अधिकतम तलब देखाए तर तिर्नुपर्ने कर र महंगीका बारेमा बताएनन् ।”
बेलायतमा वर्षको १२ हजार ५७० पाउण्डसम्मको कमाइमा आयकर लाग्दैन भने वर्षको १२ हजार ५७१ पाउण्डदेखि ५० हजार २७० पाउण्डसम्मको कमाइमा २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । यस्तै न्याशनल इन्योरेन्स मासिक ५२० पाउण्ड देखि ७९७ पाउण्ड आम्दानी हुनेले तिर्न पर्दैन भने मासिक ७९७ पाउण्ड एक पेन्सदेखि ४ हजार १८९ पाउण्ड आम्दानी हुनेले १२ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि आउने अप्रिल १ तारिखदेखि न्याशनल इन्स्योरेन्स थप १.२५ प्रतिशत बढ्दैछ ।* (सच्याइएको ।) त्यसबाहेक पेन्सनवापत पनि निश्चित प्रतिशत तिर्नपर्ने हुन्छ । अहिले एनएचएसमा वार्षिक २१ हजार ४७८ पाउण्डदेखि २६ हजार ८२३ पाउण्ड ९९ पेन्स आम्दानी भएकाले ७.१ प्रतिशत पेन्सनवापत तिर्ने गरेका छन् ।
यसबाहेक बेलायतको जीवनयापन कतिको महंगो छ (खासगरी लण्डनको अझै चर्को छ) त्यसबारे भने चर्चा गरेको पाइँदैन ।
वाइजले गरेको सर्भेअनुसार लण्डनमा एक बेडरुम फ्लाटको मासिक भाडा १ हजार २७२ पाउण्ड, एक जनाको लागि मासिक खाना, मनोरन्जन लगायत अन्य खर्च ८५९ पाउण्ड तथा यातायातमा मासिक १५८ पाउण्डसम्म खर्च लाग्ने बताइएको छ । इम्पेरियल कलेजले आफ्ना सम्भावित विद्यार्थीका लागि तयार गरेको किटमा लण्डनमा बसोबास गर्न प्रति व्यक्ति प्रति महिना १ हजार ३०० देखि १ हजार ४०० पाउण्ड लाग्ने उल्लेख छ । तर सेयरिङमा बसेमा भाडा कम पनि हुन सक्छ र अन्य खर्च व्यक्तिको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ ।
‘बेलायतमा हजारौँ नर्सहरुलाई रोजगारीको अवसर’ जस्ता शीर्षकमा केही महिनादेखि नेपाली मिडियामा समाचारहरु आउन थालेपछि बेलायतमा रहेका नेपाली नर्सहरुको संस्था नेपलिज नर्सिङ एसोसिएन युकेलाई पिरोलेको छ । यसका बारेमा दिनहुँ जिज्ञासाको ओइरो लाग्ने गरेको छ । एसोसिएनको चिन्ता छ कतै यसलाई दलालहरुले ठगीको माध्यम पो बनाउने हुन् कि भनेर । एसोसिएसनकी अध्यक्ष गौतम भन्छिन्, “बेलायतले नेपालबाट नर्सहरु ल्याउने बारेमा शुक्रबार (जनवरी १४) बल्ल पहिलो बैठक हुँदैछ तर नेपालमा केही महिनाअघि नै आजै बेलायत लगिहाल्ने जस्तो गरी प्रचारप्रसार गरियो ।”
एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष सिंखडाको अनुभवमा अहिले पनि नेपालबाट नर्सहरुलाई केयरर बनाएर बेलायत ल्याउने एजेन्सीहरुको कमी छैन । “प्रतिव्यक्ति ७ लाखदेखि १९ लाख रुपियाँसम्म लिएर नर्सहरुलाई केयररका रुपमा बेलायत ल्याएको पाएका छौँ” उनले भने । पछिल्लो तीन/चार महिनामा मात्र करिब १०० जना नर्सहरुलाई केयररका रुपमा बेलायत ल्याएको आफूले पाएको उनले बताए । बेलायतमा काम खोजिदिएवापत पैसा लिन पाइँदैन त्यस्ता एजेन्सीहरुले अन्य शीर्षकमा मोटो रकम असुली गर्ने गरेका छन् । बेलायतमा आएर त्यसरी ठगिएका दुःख पाएका नर्सहरुलाई एसोसिएसनले विभिन्न किसिमको मद्दत गर्ने गरेको छ ।
आफूले हेरेको एउटा केसको उदाहरण दिँदै सिंखडा भन्छन्, “एक जना नर्सलाई बेलायतमा केयररका रुपमा ल्याइएको रहेछ । चार महिनासम्म उहाँलाई तलब पनि दिइएको रहेनछ । बैँक खाता समेत खोलिएको रहेनछ । तलब नेपालमा बाबाआमालाई दिन्छौँ भनिएको रहेछ । उहाँलाई दिइएको सम्झौता पत्रअनुसार बेलायतको श्रम अदालतमा मुद्दा पनि हाल्न नमिल्ने रहेछ ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचो) को वर्कफोर्स सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्टमा नेपाल रेड लिष्टमा छ । तथापि नेपालबाट बेलायत व्यक्तिगत रुपमा आउन चाहने नर्सहरुलाई अहिले पनि बन्देज छैन । बेलायतमा आउने नेपाली नर्सहरुले दुःख नपाउन् र आएको दिनदेखि नै आफ्ना अधिकारहरु पाउन् भनेर एसोसिएनले काम गरिरहेको पूर्व अध्यक्ष सिम्खडा बताउँछन् ।
वर्तमान अध्यक्ष गौतम अहिले एसोसिएसनले हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार बिहान १० बजे नेपलिज नर्सिङ एसोसिएसन युकेको फेसबुक पेजबाट नेपालबाट बेलायत आउन चाहने नर्सहरुका लागि वेविनार आयोजना गर्ने गरेको बताउँछिन् । यसका साथै फेसबुक म्यासेन्जर, इमेलबाट पनि जिज्ञासाहरुको उत्तर दिने गरेको उनले थपिन् । “हामी नर्सहरु एकजुट भयौँ भने काम गर्न सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसैले म बेलायतमा रहेका सबै नर्सहरुलाई हाम्रो सदस्यता लिन पनि अनुरोध गर्दछु” उनले भनिन् ।
नर्सिङ पेशामा विदेशको अनुभव लिन चाहनेहरुका लागि बेलायतमा राम्रो अवसर भएको गौतमको बुझाइ छ । किनकि बेलायतमा नर्सिङ पेशालाई उच्च सम्मान दिइन्छ र सर्वसाधारणको यस पेशाप्रतिको बुझाइ पनि सकारात्मक छ । नेपालमा नर्सिङको अध्ययन र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्तापश्चात बिना अनुभव पनि बेलायत आउन सकिने उनी बताउँछिन् । यसका लागि ओभरसिज इंग्लिस टेष्ट (ओइटी) वा आइएलटिसमा तोकिएको अंक ल्याएपछि नेपालबाटै बेलायतको नर्सिङ एण्ड मिडवाइरी काउन्सिल (एनएमसी) मा अस्थायी पर्सनल आइडेण्टीफिकेसन नम्बर (पिन)का लागि आवेदन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो पिन प्राप्त भएपछि स्पोन्सर खोजेर बेलायत आउन सकिन्छ । ‘पर्सनल स्टेटमेण्ट’ ‘जब डिस्क्रिप्सन’मा खोजेको अनुसार लेखेमा अन्तर्वार्तामा बोलाउने र अन्तर्वार्तामा राम्रो गरे पछि काम पाइने अध्यक्ष गौतम बताउँछिन् । तत्पश्चात बेलायत आएपछि अब्जेक्टिभ स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एक्जामिनेसन (ओस्की) पास गरेर स्थायी पिन नम्बर प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि नर्सका रुपमा काम गर्न सकिन्छ । यो बाटोबाट गतवर्ष मात्र ४५ जना नर्सहरु नेपालबाट बेलायत आएको एसोसिएनको आँकलन छ ।
गौतम भन्छिन्, “कतिपय स्पोन्सरहरुले अंग्रेजी भाषाको जाँच दिँदा लागेको खर्च, हवाइजहाजको टिकटको पैसा फिर्ता गरिदिने मात्र होइन बेलायतमा बसोबासको प्रबन्ध समेत गरिदिन्छन् । एक पैसा खर्च नगरी बेलायत आउने यस्तो बाटो हुँदाहुँदै किन दलालको पछि लागेर लाखौँ पैसा खर्च गर्नु ?”